Mpanao Sary Hosodoko Amin’ny Rindrina iray No Manao Sarinà Ahidratsy Erantany Mba Hisolo Tena Ny Sisim-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2016 10:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Italiano, عربي, Português, English
Ity lahatsoratra avy amin'i Ali Budner dia tao amin'ny PRI.org no niseho voalohany tamin'ny ny 31 Aogositra 2016. Naverina navoaka eto indray ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Raha mandehandeha eny amin'ny manodidina ianao, ohatra, Sao Paulo, Brezila, na Atena, Gresy, na San Francisco, Kalifornia — mety ho tafintohina fotsiny eo alohana ahidratsy maniry avo be toy ny trano ianao … eo amin'ny trano, izay ilay izy.
Mpanao sary hosodoko an-drindrina i Mona Caron, mampiasa ny rindrina manerana izao tontolo izao ho lafika amin'ireo sarinà zavamaniry dia nohalehibeaziny. Niteny izy fa maneho ny zavamiaina eny amin'ny sisim-piarahamonina izy ireny. Ary maniry ny mba hitandremantsika tsara kokoa izy .
Monina ao San Francisco i Caron, fa teratany avy amin'ny ilany Italiana ao Soisa. Nanomboka ny asany tamin'ny fanaovana sarin-tanàna araka ny fijerin'ny masom-borona manidina izy, ary efa ela no fantatra ho toy ny artista mpanao sarin-javaboahary an-tanandehibe.
Fa avy eo nisy zava-nitranga taona vitsivitsy lasa izay. Nanomboka nanao ny mifanohitra amin'izany izy — mandoko zavatra bitika ho lehibe. Indrindra, ny ahidratsy, ireo zavamaniry kely dia mitombo anelqnelqn'ireo triatran'ny sisin-dalana na aiza na aiza, ireo zavamaniry hitsahan'ny olona. ”Ny tsy fitandremana kely omentsika azy ireny,” hoy i Caron, ”No mahangeza indrindra ny fanaovako azy ho sary hosodoko!”
”Tsy manao sary hosodoko mihantahanta toy ny an'ireo fanoharana zavamaniry kelin'ireo ramamabe aho,” hoy i Caron. Aminy, zavamaniry manana hery ny ahidratsy.
Mpanao sary hosodoko an-drindrina i Mona Caron, mampiasa ny rindrina manerana izao tontolo izao ho lafika amin'ireo sarinà zavamaniry dia nohalehibeaziny. Sary: Andrea Laue | http://www.sparebeauty.com
Ary nanao sary hosodoko goavana an'ireo ahidratsiny tany aminà firenena am-polony eran-tany izy amin'izao. Misy pissenlit ao amin'ny tafon'ny maoske ao San Francisco, pissenlit lehibe iray hafa any Soisa, zavamaniry misy tsilo ao Barcelona. Nataony hosodoko hatramin'ny ahidratsy tsy fanta-pihaviana hitany tao Ahmedabad, ilay fokontany mahantra indrindra ao amin'ny faritany Indiana ao Gujarat.
”Ary toa karazany mampihomehy ity,” hoy izy, ”Toa tsy misy fetra toy ireo ahidratsy tenany ity hevitra ity.” Ny ahidratsy dia zavamaniry niely erantany noho ny fanatontoloana. Toy izany koa, hoy i Caron, ity tetikasa ity dia nahazo faka na aiza na aiza ”satria tsy mila fomba fiteny maro ianao hanazavana azy.”
Avy amin'ny hety misy maotera tazonina any amin'ny 25 feet 5efa ho 8 m) miala amin'ny tany, manoritsoritra tsipika saribao amina rindrina volombatolalaka mikintaontaona i Caron, avy eo mitifitra loko maitso avy amina boaty eo anelanelan'ireo tsipika. Miasa aminà Akondro Ribwort izy — Plantago lanceolata — ao amin'ny tranobe fiasana misy rihana efatra ao amin'ny Telegraph Hill ao amin'ny manodidina an'i San Francisco.
Hitanao mijoalajoala eo amin'ny ankavia ny piramida Transamerica. Rehefa nahita azy io izy, nieritreritra i Caron, ”Fantatrao ve? Hifaninana amin'izany aho ! Andeha hamboly voninkazo eny aho !”
Mampiasa ny teny ”ahidratsy” izy toy ny karazana fihantsiana. Fantany fa teny manaratsy hevitra izay afaka manondro ireo karazana manjakazaka na ireo zavamaniry tsy nambolentsika na tsy tiantsika ho eny amin'ny manodidina fotsiny.
Fatatr'i Caron ihany koa fa ireo ahidratsy dia matetika manana fahafahana manasitrana na azo hanina. Fa niteny izy fa tsy izany no antony nanasongadinana azy ireo amin'ny sary an-drindrina. ”Ny tena tiako hasongadina,” hoy izy, ”dia ity hetsika fandikan-dalàna amin'ny famelomana indray ny zavatra izay efa noheverina ho maty.”
Sary: Andrea Laue | http://www.sparebeauty.com
Ohatra, ao Union City, ao Kalifornia, nalainy ny voninkazo misy felany voalohany izay niverina avy amin'ny tanety rava avy amina toerana nisy ny Superfund taloha. Nilaza izy ”Ok ianao no tokana. Ianao no tokana hanakatra rihana fito.”
Matetika dia milaza amin'i Caron ny olona fa ireo zavamaniry ataony sary dia toy ny tena izy ny endriny. Mamerimberina hatrany anefa izy fa tsia. Loikoiny avy any ambany amina zoro be herimpo mba hanome azy ireo endrika mampitolagaga. Ary nilaza izy fa efa nijanona nanontany azy ny olona : ”Ooay eh inona ity zavamaniry mahafinaritra ity? Karazan'ireo orkide na zavatra tsy mampino ve izy ity?!” Niteny azy ireo izy, ”Tsia, vao nitsahanao teo io.”
Satria amin'ny farany, nilaza i Caron, ”Ny kely indrindra amin'ny natiora dia mahagaga fa tsara tarehy raha mandany fotoana kely hijerena azy ireny ianao”
Jereo ny sary miainan'ny hosodokon'i Mona Caron: